Wararka - Sida loo doorto soosaarayaasha dhalada galaaska qurxinta ee aadka u sarreeya?
Dhalada Bixinta Saabuunta
Dhalada Muraayadda Qurxinta
Dhalada Muraayadda Reed Diffuser
Dhalada Porcelain Cad
Weelka Kaydinta Muraayadda
Sida loo doorto soo-saareyaasha dhalada galaaska qurxinta ee aadka u sarreeya?
Warshadaha la isku qurxiyo waxay u adeegsadaan baakado ay ku jiraan agabyo kala duwan, oo ay ku jiraan balaastikada iyo biraha, iyadoo dhalooyinka ay ka mid yihiin agabka baakadaha ugu da'da weyn. Waqtigan xaadirka ah, suuqa baakadaha la isku qurxiyo ee aadka u sarreeya, soo-saarayaasha ayaa wali doorbida baakadaha dhalada galaaska ah. Tan waxaa ugu wacan dhalada dhalada ah oo isu keenta faa'iidooyin badan.
Ugu horreyntii, dhalooyinka quraaradaha la isku qurxiyo waxay leeyihiin qaab-dhismeed wanaagsan, qurux, iyo tayo-dhammaad aad u sarreeya, taas oo daboolaysa baahida loo qabo baakadaha la isku qurxiyo ee aadka u sarreeya. Marka labaad, horumarinta suuqa is-qurxinta, boosaska sii kordhaya ee alaabaha la isku qurxiyo ee aadka u sarreeya, iyo baahida loo qabo in la dhiso summado ayaa dhammaantood kor u qaaday booskii suuqa ee dhalooyinka galaaska la isku qurxiyo. Ugu dambayntii, heerka nololeed ee dadku wuu soo hagaagayaa, iyo baahida loo qabo tayada alaabooyinka baakadaha ayaa sare u sii kacaya. Asalkaas oo kale, waa lama huraan in la casriyeeyo darajada dhalooyinka galaaska la isku qurxiyo.
Marka, sida loo doorto dhalooyinka dhalada qurxinta ee aadka u sarreeya ee jumlada ah. Marka hore, muuqaalka, naqshadeynta iyo farsamaynta dhalooyinka quraaradaha la isku qurxiyo. Dhammaanteen waan ognahay in waxyaabaha la isku qurxiyo ee heer-sare ay leeyihiin shuruudaha naqshadaynta baakadaha dibadda ee adag. Sidaa darteed, naqshadeynta qaab-dhismeedka iyo farsamaynta ayaa ah laba shuruudood oo muhiim u ah xulashada dhalooyinka dhalada qurxinta ee dhammaadka ah. Marka labaad, baaxadda soo -saareyaasha dhalada galaaska la isku qurxiyo, iyo baaxadda soo -saareyaasha dhalada dhalada ah ayaa go'aamiya heerka tayada wax -soo -saarka iyo heerka dhalmada muddada dambe. Ugu dambayn, qiimaha dhalooyinka galaaska qurxinta ee dhammaadka ah waxay la xiriiraan qiimaha baakadaha ee waxyaalaha la isku qurxiyo ee dambe.
Dhalooyinka dhalada ah ee qaro weyn oo yaryar ayaa loo isticmaalaa hooska indhaha, dhaldhalaalka dibnaha iyo waxyaabaha kareemka. Dhalooyinka dhalada ka weyn ayaa loo adeegsadaa aasaaska, ka -saareyaasha qurxinta, kiriimyada iyo budada. Dhalooyinka dhalada Amber waxaa loogu talagalay qubeyska iyo alaabta jirka oo aan lahayn midabyo cad. Marka ion soodhiyamka la yareeyo, galaasku wuxuu noqdaa qaab kiimiko u adkeysta baakadaha la isku qurxiyo.
Ugu dambayn, maxay tahay inay soo -saarayaashu fiiro gaar ah siiyaan marka ay dooranayaan?
Midda koowaad waa qiimaha dhalooyinka baakadaha la isku qurxiyo, maxaa yeelay wax -soo -saarka baaxadda leh, isku day inaad isbarbardhigto qiimaha intii suurtagal ah, taas oo la xiriirta qiimaha dambe. Marka labaad, naqshadeynta dhalooyinka baakadaha la isku qurxiyo, awoodaha naqshadeynta ee qaabka, iyo haddii ay jiraan qaabab dhalo oo badan oo la kala dooran karo. Ugu dambeyntii, tayada dhalooyinka baakadaha la isku qurxiyo. Guud ahaan marka la hadlayo, tayada dhalooyinka baakadaha qurxinta ee dhammaadka ah waa inay ka sarreeyaan.
Suuqa dhalada quraaradaha qurxinta ee dhammaadka ah ayaa soo baxaya, doorashaduna waxay si toos ah u saamayn doontaa iibka suuqa dambe.
Waqtiga dhejinta: Jun-18-2021
Fadlan la xiriir si aad u dalbato!
Qolka 417-1, No. 1000, Xinsongjiang Road, Shanghai, China